२० वर्षको उमेरमा मेसीभन्दा एमबाप्पे उत्कृष्ट ! | Hamro Khelkud
२० वर्षको उमेरमा मेसीभन्दा एमबाप्पे उत्कृष्ट !
शनिबार, वैशाख १४, २०७६
पेरिस (एजेन्सी)– फ्रान्सेली युवा खेलाडी केलियन एमबाप्पलेलाई धेरैले भविष्यको सुपरस्टारका रुपमा हेरेका छन् । २० उमेरमा प्राप्त गरेको सफलताका आधारमा उनीलाई भविष्यको ठूलो खेलाडीका रुपमा हरिएको हो । २० वर्षको उमेरमा बार्सिलोनाका सुपर स्टार लियोनल मेस्सीले जति सफलता प्राप्त गरेका थिए एमबाप्पले त्यो भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् ।
फ्रान्सेली फरवार्ड विश्व कप विजेतामा समावेश भइसकेका छन् भने पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) बाट खेल्दै थुप्रै कीर्तिमान बनाइसकेका छन् । अर्जेन्टिनाका लागि मेस्सीले २० वर्षको उमेरमा प्राप्त गरेको सफलता भन्दा बढी त्यहि उमेरमा फ्रान्सका लागि एमबाप्पेले गरिसकेका छन् ।
एमबाप्पले मोनाको, पिएसजी र फ्रान्सका लागि ९६ गोल गरिसकेका छन् । जबकी अहिले एमबाप्पे रहेको उमेरमा मेसीले देश र क्लबका लागि ३० गोल मात्र गर्न सकेका थिए । च्याम्पियन्स लिगमा मात्र एमबाप्पेले १४ गोल गरिसकेका छन् । जबकी मेस्सीले २० वर्षमा ११ गोल गरेका थिए भने अर्का सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले २ गोल मात्र गरेका थिए ।
महान खेलाडीको तुलाना गर्नु उपयुक्त मानिन्न तर, एबाप्पले विस्तार आफलाई सफल खेलाडीका रुपमा उभ्याउने कोशिस गरेका छन् । आउने वर्षहरुमा उनी समर्थकहरुको चासोमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मेस्सीसँगै एमबाप्पे युरोपियन गोल्डेन बुटको दाबेदारका रुपमा रहेका छन् । मेसीले भन्दा उनले यो सिजन ३ गोल मात्र कम गरेका छन् । मेसीले आफ्नो खेल जीवनको उत्कृष्ट मध्येको यो सिजनलाई पनि एक मानेका छन् ।
मेसी शनिबार स्पेनिस लिगमा लेभान्टेविरुद्ध उत्रनेछन् भने एमबाप्पेलेको पिएसजीले फ्रेन्च कपमा आइतबार रिनेसको सामना गर्नेछ ।